indawo yokusebenza epholisa umoya evaporative China yenza i-XK-18/23 / 25S
XK-18/23 / 25S workshop evaporative zezimboni umoya opholile iyona ethandwa kakhulu zezimboni umoya opholile. Siklame ngamandla ahlukene u-1.1kw, 1.3kw, 1.5kw ukuhlangabezana nokufunwa okuhlukile. Futhi kukhona phezulu, phansi, ohlangothini lomoya okukhishwa okufanele kusetshenziswe kahle odongeni, ophahleni nakwezinye izindawo.
Ukupholisa okusha kwe-12cm thickness pad industrial industrial XK-18/23 / ST
I-Industrial air cooler ngamaphayiphu okupholisa we-12cm ukucwaninga okuzimele nokuthuthuka okwenziwa yi-XIKOO ngo-2020 Owethu umjovo wethu wokubumba kanye nemodeli yethu yokusetshenziswa yelungelo lobunikazi nokubonakala kwelungelo lobunikazi. Kubandakanya ukukhishwa okuphezulu, ukukhipha phansi nokukhipha ohlangothini, kungahlangabezana nokufunwa okuhlukile kwendawo yokufaka. I ...
XK-20S thulisa zezimboni centrifugal amanzi evaporative emoyeni cooler kuyinto ethandwa kakhulu zezimboni centrifugal emoyeni cooler. Futhi kukhona phezulu, phansi, ohlangothini lomoya ohlangothini okufanele kufakwe kahle odongeni, ophahleni nakwezinye izindawo. Kusetshenziswa ukupholisa isitshalo se-60-80m2 endaweni enomswakama kanye nesitshalo se-150-200m2 e ...
umoya omkhulu opholile wezimboni opholile wokupholisa fan XK-30S
I-XK-30S enkulu yokuhamba komoya yezimboni epholisa umoya opholile iyathandwa umoya opholile wezimboni. Amandla aphansi we-3kw anomoya omkhulu we-30000m3 / h, kanye nokulethwa komoya ngama-40-50m kulayini wepayipi. Kusebenza ukupholisa indawo engu-200-250m2 ngocezu olulodwa. XK-30S enkulu Umoya zezimboni air ezipholile Ukupholisa fan ifakwe indust ...